Ozi - Ngwa nke nyocha uzo ultrasonic di ocha
Iji ultrasonic vibrating probe na nhicha: N'ihi pụrụ iche imewe nke gburugburu tube ụdị, ultrasonic vibrating probe karịsịa kwesịrị ekwesị maka nhicha nile di iche iche nke pipelines. Principlekpụrụ bụ ịgbanwe ike eletriki n'ime ike ultrasonic ma nyefee ya n'ọtụtụ na mmiri dịka iwu nke aka ya si dị. Mgbidi dị n’ime ọkpọkọ na-eme ka ọ nwee ume dị ukwuu. Shock ultrasonic nke ultrasonic na-eme n'oge usoro nnyefe na-eme ka ọnụ ọgụgụ, mmiri na mgbidi dị n'ime ọkpọkọ na-ada ụda. N'ihi oscillation dị iche iche nke ọnụ ọgụgụ, mmiri na mgbidi dị n'ime ọkpọkọ ahụ, mkpụrụ ndụ mmiri dị na ọkpọkọ ahụ na-adaba na ibe ha, na-ewepụta ike mmetụta siri ike na mmetụta ntụgharị ọkụ ọkụ. A na-eme oyi akwa dị elu ka ọ dị nkọ, peepụ, wepụ, pịrị apị, ma wepụta ya na ngwongwo nke akụrụngwa ahụ, si otú a na-achọpụta nhicha nke mgbidi dị n'ime pipeline site na nyocha ultrasonic vibrating. Tụkwasị na nke ahụ, a pụkwara iji ogwe osisi ultrasonic vibrating maka ihicha ahụ ahụ, a ga-etinyekwa ya kpamkpam n'ọnọdụ ọ bụla nke ebe a na-asacha. Ihe eji eme ihe na-agbanwe agbanwe ma dị mma, na olu nwere obere, na nhicha adịghị ahapụ akụkụ nwụrụ anwụ.
Ojiji nke nyocha ultrasonic nke ultrasonic na mmịpụta nke ọgwụgwọ ọdịnala ndị China
Enwere ike iji mpaghara ultrasonic wepụ ihe ndị nọ n'ọrụ nke ọgwụ ndị China ọdịnala. Nke mbu, a na-agbakwunye ihe mgbaze na akpa, a na-akụghasị ma ọ bụ bee ya n'ime mkpụrụ ọgwụ dị iche iche dị na China ma tinye ya n'ime ihe mgbaze; agbanyere ultrasonic generator, a na-etinye ultrasonic vibration probe n'elu nke mmịpụta tank, na ultrasonic na-emitted na mmịpụta ihe mgbaze, na ultrasonic bụ 'cavitation mmetụta' na n'ibu edinam eme na mmịpụta ihe mgbaze nwere ike n'ụzọ dị irè imebi mgbidi nke ọgwụ ọgwụ, nke mere na ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na steeti nweere onwe ya ma na-agbaze na ihe mmịpụta ihe, na n'aka nke ọzọ, enwere ike ịgbatị ngwa ngwa nke ihe na-ewepụta ihe, nke mere na a na-ewepụta ihe mgbaze ahụ. Ọ na-enwe mmekọrịta ngwa ngwa na ihe ndị na-arụ ọrụ na ọgwụ ọgwụ, ma na-agwakọta ọnụ ma na-agwakọta.
Igwe ọkụ magburu onwe ya nke nyocha ultrasonic maka wepụ ọgwụ ahụ bụ 40-60 Celsius, yabụ na ọ dịghị mkpa ịkwadebe mmiri ọkụ iji nye uzuoku ọkụ, nke na-enyere aka ịchekwa ume ma melite mmetọ gburugburu ebe obibi. Karịsịa, ọ nwere mmetụta nchebe na ihe ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ, nke dị mfe hydrolyzed ma ọ bụ ọgwụ oxidized. Nyocha ultrasonic vibrating na-agbakarị ihe dị ka nkeji 30 iji nweta nsonaazụ dị mma. A na-emeziwanye mmịpụta nke ọma ma e jiri ya tụnyere usoro ọdịnala, ọ bụghịkwa naanị ihe mejupụtara na ọgwụ ọgwụ ndị China na-ejedebe ya. Okwesiri ka otutu ogwu ogwu ndi China na ihe di iche iche. Mwepu (gụnyere mmịpụta mmiri mmiri na mmịpụta siri ike). Ya mere, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-ejiwanye ultrasonic vibrating probes maka Chinese ọgwụ mmịpụta.
Ngwa nke ultrasonic vibrating nyocha na osooso chemical mmeghachi omume
Isi njedebe nke mpi nyocha ultrasonic nke vibrating nwere njikọ chiri anya na mgbidi mpụga nke ketulu ma ọ bụ n'ime oghere nke ketulu ahụ. Na ultrasonic transducer nwere ike izipu ultrasonic na chemical reactants n'ime oghere, na mmiri mmiri na-emeso bụ ultrasonic. Mmetụta cavitation nwere ike ibute mgbanwe na mmemme nke usoro mmeghachi omume, mebie usoro ihe mgbaze nke ndị na-eme ka mmiri na-arụ ọrụ n'ime oghere ahụ, mepụta ọnọdụ okpomọkụ dị elu na nnukwu nrụgide zuru oke iji mepụta mmeghachi omume kemịkal, mepụta etiti obodo dị elu, ma kwalite ya ezigbo ọganihu nke mmeghachi omume kemịkal. Isi ihe na-akpata catalytic mmeghachi omume jijiji nyocha.
Mmetụta nke abụọ nke ultrasonic dị ka ihe igwe egwu, emulsification, mgbasa, mgbasa, wdg. Bara uru na ngwakọta zuru oke nke ndị na-eme ihe. Ngwa nyocha ultrasonic na-eji ike na-atụgharị uche nke transducers, nke nwere ike ime ka ihe a na-eme nke ukwuu na-eme ngwa ngwa ma mee ngwangwa. Nyefe ihe nwere ike dochie anya mmegharị usoro ọdịnala. N'ezie, na ngwa ndị bara uru, ọ ka mma iji igwekota igwe eletrik mee ngwangwa.
Ojiji nke nyocha uzo ultrasonic na mgbochi
Anyị na-ewere onye na-ekpo ọkụ dị ka ihe atụ. Ngwa ngwa ultrasonic vibrating na-arụnyere na ntinye nke onye na-ekpo ọkụ ọkụ. A na-achịkwa ya site na njikọ Flange na valvụ na-achịkwa. Enwere ike iji ya rụkwaa ma jigide akụrụngwa ultrasonic na-enweghị ịkwụsị mmepụta. Principlekpụrụ bụ isi bụ na ultrasonic na-ebunye ma na-ebute ike n'oge usoro nnyefe, na ihe ndị dị na mbara igwe dị ka ọnụ ọgụgụ, mmiri na ngwongwo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweta ume na usoro ịma jijiji, mmiri nke dị na ọkpọ ọkụ na-eme ka ịma jijiji na nkwekọrịta dị oke mgbe ị na-enweta ume. Mkpụrụ ndụ mmiri nwere nnu inorganic dị iche iche nke na-ejighị n'aka na onwe ha na-emepụta ọtụtụ egosipụta cavitation (cavitation), na-akpụ oghere movụl cavitation mmiri. Igwe ndị a, mgbe ọ na-agbasa ngwa ngwa ma na-emechi na mberede, na -emepụta mmetụta mpaghara nke ọtụtụ puku ikuku na ụgbọ elu dị elu nke ruru 400 km / h na ike dị elu karịa 5000 k. Ike ndị a na-ebibi njikọ nke ion dị mma na nke na-adịghị mma na ihe ndị na-akpata acid ma mebie nhazi nke oke. Ọnọdụ iji mezuo mgbochi.
Ojiji nke nyocha uzo ultrasonic na ogwu mmiri
Nyocha ultrasonic vibrating na-achịkọta nyocha ultrasonic iji tinye ume, na ike siri ike dị ike nwere ike nweta na njedebe ihu nke radieshon ultrasonic. N'ihi ike nchịkọta nke mpi ahụ, a na-emeziwanye ụda ume ike; enwere ike ime mmeghachi omume n'ụzọ ziri ezi dị ka njupụta nke ike acoustic. A na-emepụta ihu nyocha nke emitting n'ozuzu ka ọ bụrụ nke nwere ike iwepu, nke mere na enwere ike ịhọrọ nyocha nke oke ihu nke njedebe oge ọ bụla dịka ụda siri ike achọrọ. N'otu oge ahụ, mgbe cavitation na-emebi ihe nyocha ahụ, naanị akụkụ njedebe kwesịrị ka edochi ya na enweghị dochie ọnụahịa ahụ. Oke ọnụ vibration niile. Enwere ike iji nyocha vibrating Ultrasonic iji mee ihe dị iche iche na-asọ oyi. Ejila ha mee ihe na monocyclic aromatic ogige, polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, hydrocarbons chlorinated, hydrocarbons chlorinated, organic acids, dyes, alcohols, ketones, wdg. Nnyocha banyere mmiri mmiri ma nweta ezigbo nsonaazụ. N'ime ezigbo mmiri mmiri ụlọ ọrụ, ejirila akụrụngwa ahụ na-emeso mmiri mkpofu akwụkwọ, mbipụta na dyeing mmiri mmiri, mmiri mmiri na-acha mmiri, mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, mmiri mmiri ọgwụ, mmiri na-ekpofu mmiri, wdg, wee nweta nsonaazụ ọma.